QABATINKA SHAR-KA-FILASHADA. | DAL-JIRE
wadaagga fikir xor ah, waa barbilowga adduun-arg huffan
Waa mid ka mid ah dabeecadaha Aadanahu leeyahay dhammaantii, in dhanka xun wax laga eegona waa arrin iska caadi ah oo nooluhu wadaago, taas qabatinkeedunu waa in la sharaysto wax kasta, iyada oo aan la saarin miisaan sax ah oo kala miidha xumaanta iyo wanaagga wax yeelan karo ama aanu yeelan karin. Shar ka filashaduna waxay ku timaaddaa sababo laba ah midkood; baqasho xoog badan ama isla weyni xad dhaaf ah.
Hubaashii aadanahu wuxuu u collaystaa wax kasta oo noloshooda ku cusub labadaa sababood midkood. Wuxuu necbaystaa sancooyinka casriga ee meelaha kale kaga yimaadda sida dadkeennii hore ee dhagxin jiray kolkay arkaan gawaadhi soconaysa oo iyaga ula muuqanaysay mucjiso iyo duni aakhir sabaan. Sidoo kale afkaarta iyo dhaqannada cusub dadku way ka biyo-diidaan sidii dadkeennuba uga hor yimid bilowgii aqoonta casriga ah ee dugsiyada.
Qabatinka shar-ka-filashada waxa kale oo aad ka dhex helaysaa hab-nololeedkii hore ee bulshadeenna. Waxay ku maahmaahi jireen ‘Khayr wax kaama dhibee, shar u toog hay’. Tan oo qofka galinaysa feejignaan xooggan si uu wax walba ugu fiiriyo indho sharaysan, si uu ugu toog hayn karo wax walba oo kaga yimaadda. Tani waxay qofka iyo bulshadaba gelinaysa dhaqan colaadeed, cid kastana waxay dhex dhigaysaa kala-shaki iyo in aad filato cadaw kugu soo maqan gooraalaba. Sidaas ayay noloshii hore ee raacatadeennu u ahayd mid waran la yuurur ah, goor walbana rakaab ku joog ah si aad u sii jiri karto. Waxaa ma hurto noqonaysay halgan joogtaysan oo kabo ku tukasho ah, si aad rag iskaga rawdo, iskagana dhiciso deegaan dhan oo kugu cadaw ah, dabeecad adag, dugaag iyo dadba, waana halkaas meesha qabatinka shar filashadu ka unkamay.
In kasta oo hab-noleedkeenna bulsho is gadiyay qayb ahaan maanta, haddana waxa si cad u sii muuqda raadreebyadii uu lahaa. Si-araggayga, dhaqanka shar-ka-filashadu waa mid ka mid ah kuwa ugu xooggan raadadkaas. Waxa daliil cad u ah kala caagganaanta bulshada dhexdeeda ka muuqata iyo kala aammin baxa marba marka ka danbaysa sii gaamuraya. Shar kala filashada aan caqliga ku dhisnayni waxay bulshada ka dhigaysaa kuwa dhufayso ku wada jira oo difaac ku kala jira, dabcanna waxay kor u qaadaysaa xinka, is baacsiga, hirdanka, loollanka iyo ku waaga wax dhab aahaan ay ka qiimo badan tahay wadajirkoodu.
Shar-ka-filashada iyo qabatinkeedu waxay cid kasta oo kalaba kaaga dhigaysaa cadaw, illaa ay kuu caddeeyaan in aanay cadaw kuu ahayn, tani waxay meesha ka saaraysaa in la helo bulsho dhexdhexaad ah, xooggan oo fikir xor ah iyo maan hufan wax ku qiimeeya, kuwaas oo cabbirka sharka iyo khayrku aanu ugu xidhnayn qolo ama qolo kale, koox ama koox kale, qof ama qof kale.
Dhaqanka shar-ka-filashadu waxa uu ku xooggan yahay kuna kala dhex jiraa waxa aynu u naqaanno sokeeyaha iyo shisheeyaha innaga dhexdeenna ah. In kasta oo aynaan aqoon xuduudka saxda ah ee u dhexeeya sokeeyanimada iyo shisheeyenimada iyo meesha ay midi ku dhammaato midda kalana ka bilaabanto, haddana waxa inagu xooggan fikradda ah ‘Annaga’ iyo ‘Iyaga’. Mar kasta oo qofku taagan yahay Annaga wuxuu sharaystaa wax kasta oo ka yimaadda ‘Iyaga’ – kuway doonaan ha ahaadaane – Tani waxay mar walba wadataa fikirka ah in iyagu mar walba ay shar kula damacsan yihiin; iyo inaad adigu tahay mar kasta qofka saxda ah, qofka dabinka lala maaggan yahay, cidda loo dan leeyahay ama cidda xumaha loo wado. Waana sababta aad adigu mar walba u tahay qofka gobta ah, kan lagu gafay, kan la iskugu tagay, kan dhibtu gaadhay, ama kan goor walba qumman.
Noloshan aynu hadda ku nool nahay waxa laga eegi karaa dhinacyo badan oo shar-ka-filashadu gashay, heerka ugu hooseeya ee ay gaadhayna waa in khayrka la sharaysto, kolka wax maslaxad ummadeed ah oo manfaceeda loo siman yahay la hor istaago iyada oon taas haddana mucaaradaddeeda wax faa’iido ah laga gaadhayn, keliya in cidda waddaa tahay ‘Iyaga’ waa qaab aad u hooseeya oo shar-ka-filasho baqasho ku dhisan ah.
Qasab maaha in wax walba laga midaysnaado, qasabna maaha in wax walba lagu kala qaybsanaado, waxyaalaha ay dadku noloshooda qabatimaanna waa waxyaalaha ficil ahaan uga yimaadda marka danbe. Waxay wax badani ku habboon yihiin in la miisaamo laguna maareeyo maskax bed qabta. Dabcan lama rabo inaad wax kasta soo dhoweyso, laakiin waxa laga gaadhi karaa daw haddii aan fikirkeeda marka horaba lagu salayn seef la boodnimo iyo collaysi.
Waxa qumman in nolosha lagu soo dabbaalo ka fiirsasho iyo u fiirsasho si aan looga dardaar-werin jirtada mar walba. Si aynaan u sharaysan timaaddadeenna waa in aynu marka hore cagaha u dhigno hab-nololeed xasilloon oo joogtada lagu hago, iyada oo dhab ahaan la beddelayo qaabka aynu u fiirinno waxyaabo badan oo innagu xeeran, sida fikiradaha, hab-maamuleedyada, dhaqannada, iyo waliba nolol maalmeedka caadiga ah ee ashkhaastaba. Qaabkaas wax loo eegayo waa inuu ahaadaa mid ku dhisan kalsooni iyo khayr filasho (Positive), kaas oo ficilka midho-dhalintiisuna uu ku gebogeboobi karo badhaadhe iyo negaanshiyo.
Shar-filashada bulsho iyo ta qofeedba waa caado aan ammaannayn oo ay habboon tahay ka-diga-rogashadeedu. Waxa lagu gaadhi karaa beddelka qaab-fikirka iyo qaab-dhaqanka, iyada oo loo noqonayo Yaqiinta iyo Diinta Alle, taas oo dhayi kara iimaha ku yaal darisnimada, walaaltinimada, wax wadaagga, wax qaybsiga iyo guud ahaan xidhiidhada bulshada, dadkana ku midayn karta kalsooni iyo is jacayl xooggan oo gun u dhiciisu yahay addoominnimo buuxda oo Alle (SWT).
Dhamme Maxamuud A
FG: Qormadan waxay markii ugu horraysay ku soo baxay biiraalaha Weedhsan ee muddaalaha ah,’Weedhsan Magazine’. tirsigiisii 4aad, July, 2012. http://www.weedhsan.com.
This entry was posted on July 26, 2012, in Hoyga, Qormooyinka and tagged bulshada, dhaqanka sharka, dhibaato, diin, kala aamin bax, nabada, soomaalida, wanaag. Bookmark the permalink.	7 Comments
← SAFAR AAN MAQNAYN!
Murida Maanta: Gaarriye →
7 thoughts on “QABATINKA SHAR-KA-FILASHADA.”
Waa qoraal kas han sare leh ka soo baxay. Waa garaad fakaray,dadaaladay, oo xor ah. Waa farashaxanimo lagu muunadeeyey digtooni iyo dhan-walba- fiiris. Markastaba Cabdiraxmaan waxaan kuu joogaa safka hore, inta kula jecel inaad ku dhagaxowdid wanaaga, kunna hiratid meel sare. Rabina ha kuu fududeeyo taasi gaadhitaankeeda. Awguuriyo walaalkay.
Mahadsanid Sir Askar, si sidaas la mid ah waxaan kuu rajaynayaa khayr iyo wanaag IA.
Shuaib Ibrahim says:
Xaqiiq waa Qormo wax ku ool ah,tilmaamaysa dhabbaha wanagasan wax tar u leh guud ahan ummada Af-Somaliga ku hadasha , waa maqal wax ku qaadasho mudan,
maqaal ka soo maaxday Maskax fayaw iyo Aragti qumman , Dhamme Maxamud Jazakalahu khairan
ammin walba waxn ku rajaynaya Han iyo Himilo Guul iyo Horu socod aan joogsi lahayn… Allaw adaa hawl ku filan!
Mahadsanid saxbkey shucayb, si la mid ayaan anna kuu raynayaa, guul iyo gobanimo waarta
‘ADDUUNYOOY, I HODA!
MA NOOLE AAN DHIMAN! (sheeko gaaban)
Murida Maanta: Gaarriye
Hoyga Igu-Saabsan Odhaahda Sawirka Qormooyinka Sheeko Gaaban Suugaan
IS RAACAYAAL Select Month December 2013 (1) August 2013 (1) June 2013 (1) January 2013 (1) October 2012 (1) September 2012 (2) August 2012 (1) July 2012 (1) June 2012 (1) April 2012 (2) January 2012 (3) December 2011 (2)
"Haddaan waayay calan leey nashiro tan iyo Nairobi, Miyaan waayay maamuus janniyo daalac iyo naasil, Haddaan... fb.me/4JAQ0qvX9 2 years ago
Weedhsame fb.me/6WarcEaTg 2 years ago
I posted a new photo to Facebook fb.me/7E2IC6b6c 2 years ago
Haddaad aragto qoom wada dhashoo kala qaloonaaya qormo gaabatiyo wow danbayn qoommamiyo ciile. abwaan hore 2 years ago
"Dalkayaga Ilaahoow Dharag iyo daryeel iyo Wax na deeqa nagu sii' -Hadraawi 2 years ago